"Isaga Waxba Lagama Qaban Karo Wakhtiyada Qaar" - Jurgen Klopp Oo Amaanta Ka Haysan Waayay Xiddig Kooxdiisa Xalay Dhibaato U Geystay. - Gool24.Net
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa ayaa si weyn u amaanay garabka Wolverhampton Wanderers ee Adama Traore kaddib markii ay kooxdiisu xalay guul ay ku rafaaday kasoo gaadhay kooxdaas.
Liverpool ayaa markale dhibcod aad u muhiim ah qaadatay daqiiqadaha ugu dambeeya ee kulanka kaddib markii uu Roberto Firmino gool ku khaarijiyay Wolves daqiiqiiqadii 84-aad kulan ay kooxda martida loo ahaa dagaal badan muujisay.
Traore oo ah xiddigaha kubadda cagta kuwooda ugu xawaaraha badan haatan ayaa ahaa caawiyaha goolkii bar-baraha ee Wolves ee oo dhaliyay Raul Jiminez kaas oo kansalay goolkii furitaanka ee kabtan Jordan Henderson.
Marka laga yimaado inay guul kasoo gaadheen haddana tababare Klopp ayaa si weyn u amaanay Traore kaas oo nooc kasta oo dhibaato ah kulankaas kusoo abuuray daafaca bidix ee Andy Robertson.
Jurgen oo amaanaya 23 sano jirkaas ayaa yidhi “(Traore) waa mid aan waxba laga qaban karayn wakhtiyada qaar, Ala muxuu ciyaartoy yahay, Maaha isaga oo kaliya laakiin isagu waa mid aad u wanaagsan”.
Adama oo kamida xiddigaha kasoo af-laxay akaademiga kooxda Barcelona ee La Masia ayaa afar gool iyo toddoba gool caawimo xilli ciyaareedkan kasoo diiwaan gashaday kulamada horyaalka.
Kaddib bandhigyada waaweyn ee uu samaynayo, Waxa xiiso u muujinaya kooxo ay kamid yihiin kooxdiisii hore ee Barca, Real Madrid, Manchester City iyo Liverpool qudheeda walow la sheegayo in Wolves aysan ku fasaxayn wax 80 Milyan ka hooseeya.